समयमै किन हुन सकेन, एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन ? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
समयमै किन हुन सकेन, एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन ?
प्रकाशित: २०७४ असार ७ गते ०:३८
एनआरएन, अमेरिका ।
अहिले बजारमा जताततै एनआरएन अमेरिकाको चुनावकै चर्चा छ। हुनु पनि स्वाभाविकै हो। त्यही चर्चा भित्र प्रश्नको वर्षा भने प्रसस्त छ। एनआरएन अमेरिकाको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? एनआरएन अमेरिकाको चुनाव मे महिना भित्र हुनु पर्ने हैन र? भेरीफिकेशन कमिटिले के गर्दै छ? इलेक्सन कमिटिले के गर्दै छ? एनआरएन अमेरिकाले किन समयमै चुनाव गर्न सकेन? एनआरएन अमेरिकाले चुनाव नगराएर यसरी नै फेरि अर्को एक वर्ष पनि यही कमिटिले काम गर्ने सोच त बनाएको छैन? के चुनाव हुन्छ त? यस्ता आदि इत्यादि एनआरएन बिषयक प्रश्न माथि प्रश्नका वर्षाले नेपाली डायस्पोराको बजार तताएको छ।
जुलाईको २१,२२ र २३ तारिख अनलाईन मतदान मार्फत नयाँ नेतृत्वका लागि चुनाव गर्ने गरी कार्य तालिका निर्वाचन कमिटीले तैयार गर्दैछ। यसरी सर्सर्ती हेर्दा लगभग २ महिना पछाडि सरेको देखिन्छ। हाम्रो नेपाली उखानै छ- ‘रात रहयो अग्राख पलायो।’ सायद त्यही उखान टुक्काले एनआरएनको चुनावी विश्लेषण सहित बजार ततएको होला।
‘शंकाले लंका जलाउँछ भन्थे त्यहि भएको होला’। तर मैले भने यसरी हाम्रा दाजुभाइ, दिदिबहिनी तथा नेपाली मान्यवर वाट आउने प्रश्नलाई स्वभाविक तथा सकारात्मक लिन्छु। यीनै उर्जारूपी प्रश्नहरू वेला-वेला नउठदा हुन् त हामी यहाँ सम्म आई पुग्थ्यौ कि पुग्थेनौ? त्यो पनि हुन सक्छ। यो पनि एउटा सशक्त तर्क हो।
हाम्रो नेपाली समाज पाँच वर्ष अगाडि पनि थियो। हामी पनि अमेरिकामा धेरै वर्ष अगाडि देखी बस्दै आएका थियौ। डा केशव पौडेलको नेत्रित्व भन्दा अगाडि,खगेन्द्र जिसी अध्यक्ष हुनु हुन्थ्यो। उहाँले नौ महिनामा एनआरएन अमेरिकाको विधिवत चुनाव गरेर हामीलाई ल्याउने काम गर्नु भएको हो।
डा केशव पौडेलको नेत्रित्वमा दुई वर्ष काम बल्ल भयो। त्यो भन्दा अगाडि किन अहिले जति सबै नेपालीको जन जिब्रोमा यिनै प्रश्नहरुका वर्षा थिएननत? किन भने अहिले एनआरएनए अमेरिकाले सबै नेपालीको मन छोइसकेको छ।
सुधार्न खोजिन्छ, यसरी गर उसरी गर भन्ने अधिकार माया गर्ने कै हुन्छ। अरू देशका समाजलाई नत चासो नै छ, नत उनीहरूले भनेका नै छन्। यहाँ भनाइ र बुझाई मात्र फरक भएको हो। अब कुरो आयो माथिका प्रश्नको। यहाँ भेरीफेकेशनका साथीहरुले अहोरात्र खटेर १७ हजार भन्दा बढी सदस्यलाई नियम कानुन र बैधानिकता प्रमाणित गर्न लागि पर्नु भएको छ।
पहिला निकालिएको संख्यालाई मध्य नजर गरेर गरेर अन्याय नहोस भनी पुन समयको माग इलेक्सन कमिटी सँग गर्नु भयो। इलेक्सन कमिटीका बिध्वत् महानुभावबाट दुधको दुध र पानीको पानी हुनु पर्छ कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नहोस भनी समय थपी दिनु भयो। पुन ईमेल सच्याउने र आफ्नो सहि ठेगाना फोटो प्रमाण आदि माग्ने काममा भेरीफिकेशन कमिटीले अहोरात्र खटेर काम गरेको छ। भेरिफिकेसन कमिटीले नयाँ,पुराना दुवै प्रमाणित गरेर १४ हजार ८ सय ८५ जनाको सदस्यता सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाई सकेको छ।
एनआरएनए अमेरिकाले उहाँहरुलाई जिम्मा दिएको काममा हस्तक्षेप गर्न पाउदैन र हस्तक्षेप गरेको पनि छैन। जे होस काम गर्नु र तर्क गर्नु भनेको नितान्त फरक कुरा रहेछ। भेरीफिकेशनले काम गर्दै जाँदा समय केही बढी लागे पनि इमानदारिता, सत्यपरायणर धर्मको काम होस भनी अझ समय लिएर गर्नु भएको होला।
इलेक्सन कमिटिले पनि व्यवाहारिक भएर उहाँ हरुको सल्लाह बमोजिम काम भएको छ भन्ने हामीले वुझेका छौ। काम गर्दै जाँदा कही कतै गल्ती पनि भएका होलान तर जानेर गल्ति हुनु र नियत खराब राखेर गल्ति हुनुमा आकास जमिनको फरक हुन्छ। जे होस् उहाँहरुले कुनै पनि काम नियम कानुन विपरीत गर्नु भएको छैन।
इलेक्सन कमिटिले पनि पुन नोटिस दिएर तुरून्त ‘अठार उन्नाइस वटा भोटर्सको एउटै ईमेल प्रयोग भएको पाइएको छ हामी परिवार र एकै ठाउमा वसोवास गर्नै आफन्त भन्दा बाहेकलाई एउटै ईमेल दिन्नौ सम्पुर्ण कामहरु नियमसँग हुनु पर्छ।’ ईलेक्सन कमिटीका सदस्य विश्व वरालले बताएका छन्।
एनआरएनए अमेरिकालाई संस्थागत बनाउन सबैले आ -आप्नो ठाउँ वाट गर्नु भएको प्रयास साह्रानिय छ। एनआरएनए अमेरिकाले पनि आफुले गरेका र गर्दै गरेका २६ वटा कामको फेहरिस्ट लिएर आएको छ। अब हामी सम्पूर्ण नेपालीले सोच्नु पर्ने एनाअरएनले हामीलाई के दियो भन्दा पनि एनआरएनएलाई हामीलाई के दियौ भन्ने अहम प्रश्न हाम्रो अगाडि खडा भएको छ।
राजनिशको भनेका छन ‘छोरा पाए पछि उसले केही काम गरेन र सघाएन भनेर हामीले सानैमा घाँटी निमठ्यौ सोही काम वोट विरूवालाई गर्यौ भने पनि हाम्रै नोक्सान हुन्छ। त्यसलाई त १८ वर्ष सम्म पाल पोषण गरेर शिक्षा दिक्षा दिएपछी बल्ल उसले सयोग गर्न थाल्छ। वोट विरूवालाई पनि गोडमेल र मलजल गर्नै पर्छ।’
हामा संघ संस्था प्रजातन्त्र र समाज तथा समाज भित्रका नधेरै कुराहरू पनि त्यही हुन्। पहिला त हामीले नै मल जल गर्नु पर्‍यो नि हैन र?